लोकप्रिय मोडल दुर्गेश थापाले करोडौ खर्चिएर काठमाडाैँमा घर बनाएका छन्। दुर्गेश थापाले आफ्नै घरसहितको तस्बिर सार्बजनिक गरेका छन ।
सोमवार, अशोज ११, २०७८ १२:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। लोकप्रिय मोडल दुर्गेश थापाले करोडौ खर्चिएर काठमाडाैँमा घर बनाएका छन्। दुर्गेश थापाले आफ्नै घरसहितको तस्बिर सार्बजनिक गरेका छन । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
दुर्गेश दोहोरी क्षेत्रमा सर्बाधिक रुचाइएका मोडल हुन् । उनले पर्ची तामाङसँग बिहे गरेका हुन् । सुटुक्क अन्तरजातीय बिहे गरेका दुर्गेशले ३ बर्षपछि मात्रै जानकारी दिएका थिए।
छोरो जन्मिएपछि उनले फेसबुकमा बिहे भएको खुलासा गरेका थिए। यस अगाडी उनले ६० लाखको कार किनेको समचार निकै चर्चामा थियो भने अहिले करोडौको घर बनाएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ।
बिबादमा रहेर चर्चामा रहने कलाकार हुन् थापा। बाग्लुङमा जन्मिएका थापा सर्जक बसन्त थापाको भाइ हुन्। सबैले बसन्त थापाको भाई भनेर उनलाई चिन्छन तर थापा आफ्नै भाइ भने हैनन् । उनि पारिवारिक सम्बन्धमा भाइ पर्छन ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन- मेरो छोरा ठिक ८ महिना पुगेसँगै जिवनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने क्रममा आफ्नै निवास लिएको छु । यहाँसम्म आईपुग्न मलाई सधै साथ सहयोग दिने मेरो परिवार,दर्शक भगवानप्रती आभारी छु।
पछिल्लो समय कलाकारितमा नै लागेर घर गाडी जोड्ने कलाकारहरू बढिरहेका छन् ।
यी हुन् भारतका पाँच अर्बपति, कति सम्पत्ति कसको ?
१० वर्षमा फ्लप भएका आमिर खानका यी फिल्महरु
अदालतमै पुगेर शाहरुख खानका छोरा आर्यनले स्वीकार गर्दै यस्तो कुरा खुलाएपछि…….
मिथुनले किशोर कुमारको तेस्री श्रीमतीलाई विवाह गरेका थिए